A Zimbabwe Spring? ED embraces surprising freedoms - NewZimbabwe.com A Zimbabwe Spring? ED embraces surprising freedoms - NewZimbabwe.com
A Zimbabwe Spring? ED embraces surprising freedoms
7th May 2018 News Headlines
HARARE: Zimbabwe’s president is rolling out freedoms as never seen before in the country recovering from the 37-year grip of former leader Robert Mugabe.
And on Wednesday, Mnangagwa publicly criticized his own ruling party for using police officers as polling agents during its internal elections, a first in a country long used to Mugabe’s sharp-tongued defence of deploying security agents to conduct party business.